काभ्रेली सांसदहरुले के भने सदनमा ? (भिडियो सहित) « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
काभ्रेली सांसदहरुले के भने सदनमा ? (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति : २०७६, २४ पुस बिहीबार
धुलिखेल, २४ पुस: प्रदेश ३ को पाँचौ अधिवेशन सुरु भएको छ । बुधबारबाट अधिवेशन सुरु भएको हो । प्रदेशसभामा प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषयले प्रवेश पाएको छ । छलफलमा सांसदहरु दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन् । बुधबार धारणा राख्ने सांसदले राजधानी हेटौंडा र काभ्रे हुनुपर्ने पक्षमा बोलेका हुन् ।
सदनमा काभ्रेका सांसद रत्न ढकाल र बसुन्धरा हुमागाईले प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये संघीय राजधानी नजिक रहेको काभ्रे प्रदेश राजधानीका लागि उपयुक्त भएको बताए । उनीहरुले प्रदेशका ८ जिल्लासँग सीमा जोडिएको काभ्रेको विकल्पमा अन्य कुनै ठाउँ राजधानीका लागि उपयुक्त नभएको जिकिर गरे ।
सांसद चन्द्र लामाले काभ्रे भौगोलिक हिसाबले राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको बताए । केही दिनमा हुने मतदानमा काभ्रेको पक्षमा लाग्न उनले सांसदहरुलाई आह्वान नै गरे । संदनमा लक्ष्मण लम्साल र गोमा भुर्तेलले पनि काभ्रे नै उपयुक्त स्थान भएको बताएका थिए ।
काभ्रेको नमोबुद्धमा बस दुर्घटना, ३ जना गम्भीर घाइते
काठमाडौं २८ बैशाख : काभ्रेको नमोबुद्धमा बस दुर्घटना हुदा ३ जना गम्भीर घाइते भएका छन्
स्थानीय तहको निर्वाचन अवधिभर जेठ १ गतेसम्म मदिरा निषेध
बझाङ २२ वैशाख : स्थानीय तहको निर्वाचन अवधिभर बझाङमा मदिरा निशेध गरिने भएको छ ।